Gullivet Dam, Chimhanda
CHIMHANDA, RUSHINGA —
Vamwe varimi vekuRushinga vari kuchishandisa mvura yekudiridzira vanoti vava kutyira ramangwana ravo sezvo dhamu rinovapa mvura, riri kuzara nejecha rakawandisa.
Chirongwa chevarimi cheChimhanda Irrigation Scheme mudunhu reMashonaland Central, chine varimi zana nemakumi mana nevashanu, uye chakatanga mugore ra1992.
Varimi ava vanoti kunyange hazvo nzvimbo yeruRushinga iri yedzimwe nzvimbo dzisingawani mvura yakakwana, vanoti dhamu reGulliver ranga richivapa mvura izvo zvaiita kuti varime katatu pagore vachiwana zvekudya pamwe nemari yaibva mukutengesa zvirimwa zvavo.
Nekuda kwejecha rakawandisa rapinda mudhamu iri, varimi vanoti vave kutyira kuti mumakore mashomana anotevera, nzara inogona kudzoka zvakare munzvimbo mavo kana dambudziko rejecha mudhamu rikasagadzirwa.
Mumwe wevarimi vepaChimhanda Irrigation Scheme, VaAlfa Karero, vanoti vakakwanisa kupedza nzara mumba pamwe nekuendesa vana kuchikoro nemari yekurima.
Asi VaKarero vanoti ramamgwana ravo nemhuri dzavo harichisina kujeka.
VaKarero vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende igarise patsva varimi vari kurima kumusoro kwedhamu iri kuitira kuti vasavhiringa ivhu riri kumusoro kwedhamu iri.
Izvi zvatsigirwa nemumwe murimi, Va Chinguku Gunde, avo vatiwo hupenyu hwavo hwange hwachinja zvikuru nekuda kwekurima vachidiridzira. VaGunde vati chikumbiro chavo kuhurumende ndechekuti vabatsirwewo kubvisa jecha riri kupinda mudhamu kuti varambe vachiwana raramo.
Sachigaro weChimhanda Irrigation Scheme, VaStanley Kapasura, vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende pamwe nemasangano akazvimirira vabatsiro Chimhanda kubvisa jecha munzizi dzinodira mudhamu reGulliver.
Mukuru weMazowe Catchment muZimbabwe National Water Authority, Amai ColletaTundu, vanoti ongororo yakaitwa mugore ra2015 inoratidza kuti zvikamu makumi mana kubva muzana zvedhamu iri ijecha.
Amai Tundu vanoti kurimwa kuri kuitwa nevamwe vagari vari kumusoro kwedhamu pamwe nekutemwa kwemiti ndozviri kukonzera kueredzwa kwejecha richipinda mudhamu reGulliver iri.
Hurumende yakatanga chirongwa chekubvisa jecha munzizi nemadhamu makuru munyika.
Nyanzvi dzinoti chirongwa chekubvisa jecha iri chinoda mari yakawanda zvikuru.
Nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvenharaunda dzakashanyira irrigation yeChimhanda neChitatu vaine chinangwa chekuona kuti dambudziko rakatarisana nevarimi iri rngagadzirwe seyi.